Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Kane, Neymar, Ronaldo, Varane, Aguero, Bailly, Martinez
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka suuqa kala iibsiga: Kane, Neymar, Ronaldo, Varane, Aguero, Bailly, Martinez
April 14, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Weeraryahanka reer England Harry Kane, oo 27 jir ah, ayaa doonaya inuu sii joogo Premier League isla markaana uu aado midkood Manchester United ama Manchester City haddii uu ka tagayo Tottenham . (Independent)
Xiddiga reer Brazil Neymar, oo 29 sanno jir ah, ayaa sheegay in qandaraaska loo kordhinayo Paris St-Germain ‘aysan aheyn arrin haatan sii socota’ waxaana uu dareemayaa inuu aad ugu faraxsan yahay kooxda heysata horyaalka Faransiiska. ( Goal)
Manchester United ayaa dooneysa inay dib ula soo saxiixato weeraryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah oo ka tirsan Juventus , waxaana ay tixgelin doontaa heshiis isku bedel ah oo khadka dhexe reer France Paul Pogba, oo 28 jir ah, uu ugu laabanayo Juve. (Calciomercato)
Manchester United ayaa sidoo kale dooneysa inay xagaaga heshiis la gaarto daafaca Real Madrid iyo xulka France Raphael Varane. 27 jirkaan ayaa Real waxa ay ku qiimeysaa £ 60m. (Dailymail)
United iyo Chelsea ayaa xiiseynaya weeraryahanka Juventus ee reer Argentina Paulo Dybala, 27. (Tuttosport )
Tottenham ayaa u maleyneysa in tababaraha Wolves Nuno Espirito Santo inuu noqon karo bedelka mustaqbalka tababare Jose Mourinho. (Express)
Chelsea ayaa weli isha ku heysa daafaca reer Uruguay iyo kooxda Atletico Madrid Jose Maria Gimenez, oo 26 jir ah, laakiin waxay doorbideysaa daafaca dhexe ee xulka 21 jirada France ee Sevilla Jules Kounde, 22 jir ah (La Razon)
Real Madrid ayaa weli kalsooni ku qabta inay lasoo saxiixato weeraryahanka reer France Kylian Mbappe xagaagan laakiin 22 jirkaan oo sii joogaya Paris St-Germain ayaan meesha laga saari karin. (Goal)
Barcelona ayaa dalab ka gudbin doonta weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero, oo 32 jir ah, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo xagaaga, laakiin ma waafaqi doono 10 milyan euro-xilli ciyaareedkiiba (8.7m) oo ay bixiso Juventus. (Sports.es)
Everton ayaa xiiseyneysa inay la soo saxiixato daafaca midig ee England Under-21 Max Aarons oo ka socda Norwich City laakiin waxay doonayaan inay isku dayaan inay yareeyaan qiimaha 21 jirkaan uu ku dalbanayo 30 milyan ginni. (Times)
Spurs ayaa raadineysa inay xagaaga u dhaqaaqdo 23 jirka weerarka ka ciyaara ee reer Austria Sasa Kalajdzic, kaasoo u ciyaara kooxda Stuttgart. (Eurosport)
Boca Juniors ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira. Xiddiga reer Uruguay, oo 25 jir ah, ayaa haatan amaah kula jooga Atletico Madrid , kaasoo aan dooneynin inuu heshiiskiisa ka dhigo mid joogto ah. (TyC Sports)
Daafaca reer Ivory Coast Eric Bailly, oo 27 jir ah, ayaa iska diidi doona qandaraas cusub oo uu kula joogo Manchester United , waxaana uu doonayaa xagaaga inuu u dhaqaaqo. Qandaraaskiisa haatan ayaa dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda. (ESPN)
Aston Villa ayaa isku diyaarineysa inay dalab weyn ka hesho goolhaye Emiliano Martinez xagaagan. 28 jirkaan reer Argentina ayaa lagu soo waramayaa inuu diirada u saaran yahay Manchester United . (Footballinsider247)
Valencia ayaa u soo bandhigtay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer Portugal Goncalo Guedes, oo 24 jir ah kooxda Wolves . (Dailymail)
Daafaca bidix ee reer Portugal ee kooxda Wolves Ruben Vinagre ayaa diirada u saaran Benfica . 22 jirkaan ayaa haatan amaah ugu jooga kooxda Famalicao. (Footballinsider)
Fulham, Monaco iyo Genk ayaa xiiso u qaba saxiixa Chelsea ee 22-sano jirka ah Ike Ugbo, kaasoo amaah ugu Cercle Bruges. (Goal)